Xisbiga Kulmiye oo sheegay cidda ay la tahay in talada dalka lagu wareejiyo | Somaliland.Org
Xisbiga Kulmiye oo sheegay cidda ay la tahay in talada dalka lagu wareejiyo
August 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xisbiga Mucaaradka ah ee Kulmiye ayaa shaaca ka qaaday cidda ay aaminsan yihiin in talada dalka lagu wareejiyo haddiiba Doorashadu ku qabsoomi waydo waqtiga loo cayimay ee 27-ka September, si ay dalka u gaadhsiiyaan Doorasho xor iyo xalaal ah. Waxaanu mar kale ku celiyay in aanay aqbali doonin muddo-kordhin dambe oo loo sameeyo Madaxweyne Rayaale.
Xisbiga Mucaaradka ah ee Kulmiye waxa u sheegay in ay weli ku taagan yihin mawqifkoodii ahaa in aan Madaxweyne Rayaale muddada loo kordhin haddiiba ay muddadu ka dhammaato iyada oo aanay dalka ka dhicin wax Doorasho ahi markay gaadho 27-ka September iyo in la soo dhiso Xukuumad dalka gaadhsiisa Doorasho xor iyo xalaal ah. “Mawqifkayagu waan in aanu Rayaale maalin ku darsan karin xukunka haddii la gaadho maalinta 27 September 2009 iyo in dalkan loo raadiyo Maamul-ku-meel gaadh ah oo dalka Doorasho gaadhsiiya.” Sidaa waxa yidhi Xoghayaha guud ee Xisbiga Kulmiye Keyse Xasan Cige.
Mar aanu Xoghayaha waydiinay su’aal nuxurkeedu ahaa, cidda ay Xisbi ahaan aaminsan yihiin in talada loo dhiibo haddiiba muddadu ka dhammaado Xukuumadda hadda, waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi, “Sideedaba laba Weji ayuun bay yeelanaysaa, Weji waa Weji Siyaasadeed oo waynu ognahay oo waxaynu halkaa ku soo gaadhnay isu-tanaasul iyo arrimo lagu heshiiyo ama wax la meel-mariyo. Midna, waa sharci oo Dastuurkay maraysaa siduu doono wax ha uga sheegee, Dastuurkeenuna waa caydhiin oo waad ogtahay oo wuxuu u baahan yahay in qodobo badan Xeerar laga sameeyo oo hoos loogu dhaadhaco. Hase yeeshee, Xeer iyo Dastuur baynu leenahay. Markaa haddii aynu taa sharciga iyo Dastuurka ah raacayno iyo haddii inta aynu kaa isla laabno Siyaasad, Beelaheenii, Odayaasheenii iyo Xeer-jajabkeenii ku wada socono oo ay Siyaasad tahay, labadaas uun baa bannaan.”
Xoghayaha guud waxa kale oo aanu waydiinay maadaama uu dalku u gudbay habka Xisbiyada badan, sababta keentay in labada Jid ee ay aaminsan yihiin inay bannaan tahay ay ugu soo dareen hab beelo ku dhisan in lagu xallilo khilaafka, waxaanu ku jawaabay oo uu yidhi, “Horta, Anagu Xisbi ahaan waanu ka soo horjeedaa in Dalka Beelo lagu celiyo oo Geedkii la hoos geeyo, waayo waynu ka soo gudubnay oo intaas oo marxaladood oo aynu marnay Dastuur baynu yeelanay oo waad ogtahay. Balse, qodobka kaliya ee maanta bannaani waa in dhinaca Sharciyadda la maro. Waxaanan taa uga jeedaa waxa weeye, waxaynu leenahay Golayaal Sharci-dejineed oo ah Golayaal go’aan gaadha.” Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Maanta waynu ognahay oo Guurtidu waa Hay’adda eel eh go’aanka u dambeeya ee Haa ama Maya ah. Waa Hay’adda ama wax kordhin karta ama aan Kordhin karayn, iyadaana qodobada qaarkood marka ama Madaxweynuhu dhinto ama is-casilo ama Xil-ka-xayuubini timaaddo, uu Sharcigu qorayaa in Guddoomiyahoodu xilka qabto muddo. Haddiise ay arrintu tahay dan Qaran iyo badbaadin, dee Golaha Guurtidaba waa lagu wareejin karaa (talada dalka), waa haddii si wanaagsan wax loo arkayo. Markaa, Anagu dhinaca Sharciga ayaanu tixgelinaynaa.” Mar aanu sii waydiinay in taa macnaheedu yahay in ay aaminsan yihiin Xisbi ahaan in talada dalka lagu wareejiyo Golaha Guurtida, ayaa wuxuu yidhi, “Waxaanu anagu leenahay ha lagu wareejiyo Golayaasha Sharci-dejinta ee labada Gole Baarlamaan.”